Dad lagu qabqabtey Boosaaso – Radio Baidoa
Dad lagu qabqabtey Boosaaso
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxaa ay howlgallo dad badan lagu qabqabtey ka sameeyeen xaafado ka tirsan Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Howlgalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii Kooxo hubeysan ay hal askari dileen mid kalena ay dhaawaceen,isla markaana ay goobta ka baxsadeen,waxaana askarta la diley ay la shaqeynayeen Waaxda Canshuuraha berriga ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Ciidamada ayaa waxaa la sheegay in baaritaan xoogan ay ka sameeyeen aaga uu weerarka ka dhacay ee Bartamaha Boosaaso,iyaga oo howlgalka ku qabqabtey dad u badan dhalinyaro.
Dad ku sugan Boosaaso ayaa Risaala waxaa ay u sheegeen in dadka la qabqabtey la geeyey Saldhiga Magaalada Boosaaso,hayeeshee badankood la siidaayey,waxaana saraakiisha Ciidamada ay sheegeen in qaar kamid ah dadka la qabtey ay baaritaano ku hayaan.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay bilihii la soo dhaafay noqotay mid amnigeeda aan wanaagsaneyn,waxaana xusid mudan in haatan uu ku sugan yahay Madaxweynaha Puntland oo dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay safar ugu maqnaa dalka Kenya.
Dowladda oo Ciidamo horleh geyneysa Gobolka Gedo
Daahir Geelle oo shaaciyey inuu yahay Musharax Madaxweyne 2021